That's so good, right?: June 2016
လက်သမားအတတ်ကို ဘယ်လိုသင်ခဲ့သလဲ? (အပိုင်း တစ်)
ငယ်ရွယ်အစဉ်အချိန်မှာ လိင်စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုစတင်ထိတွေ့သိရှိခဲ့သလဲဆိုတဲ့အချက်ကို ကျနော်တို့စိတ်ဝင်စားကြမယ် ထင်ပါတယ်။ အချို့သောသူများကတော့ သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသိဥာဏ်အမြင်ပွင့်လင်းစအချိန်တွေအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကြောင်းအရာပုံပြင်တစ်ပုဒ်စီတိုင်းကို ခွင့်ပြုမှုနဲ့အတူ နာမည်များကိုပြောင်းလဲပြီး ရေးသားဖော်ပြပါ့မယ်။ သူတို့ရဲ့ဘ၀အစဦး တစ်ကိုယ်ရေအာသာဖြေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရင်အဆင်ပြေလည်းဆိုတာ တတ်မြောက်ခဲ့မှုအပေါ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဧရိယာအလိုက် ရွေးချယ်ပြီး အကန့်အသတ်ထားရေးပြတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပြန်ပြောင်းသတိရမှု အဖြစ်မှန်တွေဖြစ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ ပြုပြင်တန်ဆာဆင်ထားမှုတွေမပါပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ သတိရခြင်းတွေကို ဘာသာပြန်သည့်သဘောဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့် သူတို့ မူရင်းစကားလုံးတွေအတိုင်း အသုံးပြုရင်း ကျနော် တတ်ကျွမ်းသလောက် ရေးသားထားချက်များ ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။
‘ကျနော် ဆယ်သုံးနှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအကြား လိင်ကိစ္စမှာ ဘယ်လိုထိုးသွင်းဆက်ဆံမလဲဆိုတဲ့ အခြေခံ တွေးခေါ်မှုမျိုးကို စတွေးမိခဲ့တယ်ဆိုပါတော့။ တနင်္ဂနွေတစ်ရက် မနက်ပိုင်း ကာတွန်းစာအုပ်တွေဖတ်ပြီးချိန် အခန်းတံခါးကိုပိတ် အိပ်ခန်းထဲ တစ်ယောက်တည်းပေါ့ဗျာ….အဲ.. တစ်အိမ်လုံးမှာ ကျနော်ပဲရှိတယ်ထင်တယ်။ ကျနော်အုံးနေကျ ခေါင်းအုံးကိုယူ ကြမ်းပြင်ပေါ်အသာချကာ ခေါင်းအုံးထိပ်ပိုင်းက ကြယ်သီးလေးကိုဖွင့်ပြီး မာတောင့်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲလေးကိုထိုးထည့်ရင်း လိင်ဆက်ဆံသလိုမျိုး ခါးကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားခဲ့တာပါ။ ပထမအကြိမ်က အရည်ထွက်တဲ့အထိ ဇာတ်သိမ်းခဲ့သလား မသိမ်းခဲ့ဘူးလားဆိုတာ မမှတ်မိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ ပြီးတဲ့ခံစားမှုမျိုးထိဖြစ်လာခဲ့တာမှတ်မိပါတယ်’
‘ကျနော့်အသက် ဆယ့်နှစ်နှစ်လောက်မှာ ကိုယ့်ဖာသာ အာသာဖြေတတ်ခဲ့ပုံပဲဗျ။ ဘယ်လိုနည်းလမ်းမျိုးနဲ့ စခဲ့လည်းဆိုတာတော့ ပြောရခက်တယ်။ လိင်တံတောင့်တင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းခန်းထဲမှာသိခဲ့တာပါ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ ဟိုအကြောင်း သည်အကြောင်းပြောရင်း လိင်တံမာလာတတ်တာကို သိခဲ့သလို ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း လိင်တံမာမာလာတတ်တာကိုသိတယ်လေ။ တစ်ခါကများ ဘောင်းဘီထဲကနေ ရုတ်တရက်ခေါင်းထောင်ထလာသေးတယ်။ (ဟား ဟား ဟား) အဲ့အရွယ်တုန်းက လိင်ကိစ္စတွေကို ကျနော်သိပ်မသိသေးဘူး။’
‘ဘယ်လိုစလုပ်ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတော့ ရေချိုးချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တာဗျ။ အခြားနေ့တွေကလို ပုံမှန်အတိုင်း ကလေးတစ်ယောက်ရေချိုးပေးသလိုမျိုး ရေးချိုးပေးတာ သဘောမကျသလိုကြောင့် တစ်ယောက်တည်းချိုးခဲ့တယ်။ ရေချိုးကြွေဇလုံထဲ ဆပ်ပြာမြှုပ်တွေနဲ့ ဆော့ကစားနေခဲ့တာ ပေါ့ အစပိုင်းတော့။ ကစားရင်း ကစားရင်းနဲ့ တကိုယ်လုံးပိုသန့်ရှင်းချင်လာတယ်ထင်တယ်…ဟား ဟား’
‘အမေသင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်တိုက်အ၀တ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လေ။ အဲ့အ၀တ်စက မျက်နှာသုတ်ပုဝါစတစ်မျိုးနဲ့လုပ်ထား တာဗျ တော်တော်ထူတဲ့ ကိုယ်တိုက်အ၀တ်ပဲ။ ရေတွေကိုစုပ်ယူထားတော့ လေးနေတတ်တယ်။ အင်း…ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူး နွေးပြီး လေးနေတဲ့အ၀တ်စကို ကျနော့်ပေါင်ခွဆုံမှာထားလိုက်မိတယ်။ ကျောပြင်တလျောက် ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်ဖြစ်လာသလိုခံစားရပြီး ရေထဲမြုပ်မနေတဲ့ ကိုယ့်တင်ပါးကိုယ်ကို ကိုင်ထားရော။ လေးနေသလို နည်းနည်းကြမ်းတဲ့ ကိုယ်တိုက်အ၀တ်စကို ကျနော့်ငပဲနဲ့ ကပ္ပယ်အိတ်ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ ဖီလင်က တကယ်မိုက်တယ်။ ကျနော့်ငပဲမာတောင့်တာမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးထင်တယ်။ နွေးပြီး လေးနေတဲ့ အ၀တ်စနဲ့ ကျနော့်ငပဲကိုဖိနေတဲ့အရသာက ကောင်းနေတာကိုပဲသိတယ်။’
"ဒီတော့…နောက် သုံးလေးကြိမ်လောက်ရေချိုးချိန်တိုင်းလည်း အဲ့သလိုပဲနေခဲ့တယ်။ တစ်ပါတ်သုံးကြိမ်လောက် ရေချိုးတဲ့အချိန်တိုင်း လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာထင်တယ်။ ရေချိုးကြွေဇလုံထဲ ရေချိုးတဲ့အချိန်မှာ လိင်အာသာမဖြေဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အိပ်ရာထဲမှာ အာသာဖြေဖို့ ဖြစ်ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်ဗျ”
"တစ်ညပေါ့….အိပ်ပျော်လုဆဲဆဲမှာ ငပဲကခေါင်းထောင်ထလာတယ်။ ချည်သား ညအိတ်ဝတ်စုံ ကျနော်ဝတ်ဆင်ထားခဲ့တာကို မှတ်မိတယ်။ ဘောင်းဘီရှေ့ပိုင်းက ကြယ်သီးလေးတွေ တပ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ မာတောင့်လာတဲ့ငပဲ သူ့ဟာသူတိုးထွက်သွားလို့ရတဲ့ အနေအထားဒီဇိုင်းမျိုးလေ။ အပေါ်ကခြုံထားတဲ့ စောင်နဲ့အ၀တ်စကို မာတောင့်နေတဲ့ငပဲပေါ်ကပ်နေအောင် လက်တစ်ဖက်က အသာဖိကိုင်ထားရင်း တင်ပါးကိုကြွတက်ကာ ပင့်ပင့်ကစားပါတယ်။ ရေချိုးအ၀တ်စနဲ့ဖိပွတ်ကစားစဉ်က ခံစားရတဲ့ ဖီလင်လိုမျိုး တကယ်မိုက်ပါတယ်။ ညအိပ်ဘောင်းဘီကြယ်သီးလေးဖြုတ်ထားတာပေါ့။ များသောအားဖြင့် ငပဲကိုအပေါ်ပင့်ပင့်ထိုးကစားမိပေမဲ့ ပွတ်သပ်ပြီး ဖိညှစ်တာကနည်းနည်းပိုပါတယ်။ အဲ့ညက ဒီထက်ပိုပြီးတော့ ဘာမှဆက်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။”
"ကျနော့်အထင် နှစ်ရက် ဒါမှမဟုတ် သုံးရက်လောက်ကြာတဲ့အထိ စိတ်ထဲတစ်မျိုးပဲတွေးနေမိတယ်။ မနက်ခင်းရောက်တိုင်း ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးပြုတ်ပြီး အပေါက်ကနေ မိုးပေါ်ထောင်ထောင်နေတတ်တဲ့ငပဲကိစ္စကို ဘာကြောင့်မှန်းမသိခဲ့ဘူး။ အပေါ်ကနေ လေးလေးပင်ပင် ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ စောင်တွေ အိပ်ရာခင်းတွေကို ငပဲနဲ့ ကော့ကော့ပြီး မသိမသာပွတ်သပ်မိတာတော့သတိရတယ်။ တစ်ခါတလေတော့ ခပ်ပုံ့ ပုံ့ဖြစ်နေတဲ့ မွှေးပွစောင်ပေါ်ကို မှောက်ပြုပြီး ငပဲကိုပွတ်သပ်တတ်သေးတာလေ။ အခုကျတော့ ရေစိုမှုနဲ့အတူ ပွနေတဲ့ ကြေး(ဂျီး)တိုက် အ၀တ်စကို ကျနော့်ငပဲပေါ်အုပ်တင်ပြီး အလုပ်ရှုပ်တတ်နေပါပြီ။ ဒုံးကျည်လိုမတ်နေတဲ့ ငပဲကိုအမြဲတမ်းဖိထားပေးတတ်တဲ့ မွှေးပွစောင် ကြီးတွေကို သဘောကျလိုက်တာ”
" တတ်နိုင်သမျှ အပေါ်ကဖိထားတဲ့ ပေါင် ၉၀လောက်ရှိတဲ့စောင်ကြီးကို ပင့်ပင့်ထိုးလိုက်တဲ့ အခါတိုင်း နုညံ့တဲ့အမွှေးတွေက ကျနော့်ငပဲကို အသားကုန်ပွတ်သပ်ပေးပုံများ ကြက်သီးမွှေးညှင်းများတောင်ထမိပါတယ်။ ကျနော့်မျက်နှာကို ခေါင်းအုံးထဲမြုပ်နေအောင်ဖိကပ်ထားရင်း ၀တ်ထားတဲ့ ညအိပ်ဘောင်းဘီကို တင်ပါးတွေပေါ်တဲ့အထိ လျောချထားရင်းလုပ်တာပါ။ နောက်တော့ ကိုယ့်တင်သားဆိုင်တွေကို လက် တွေနဲ့ဖိဖိကိုင်ကာ ဖျစ်ညှစ်ကြည့်မိပြန်တော့ ရင်ထဲတလှပ်လှပ်နဲ့ဖြစ်လို့ ခေါင်းထောင်ထမိပြီးမှ ခေါင်းအုံးပေါ်ဘုံးကနဲပြန်လှဲချမိတယ်။ တင်ပါးဆုံရဲ့အားကိုသုံးကာ ခပ်ပုံ့ပုံ့ဖြစ်နေတဲ့ စောင်ကိုဖိပွတ်ကော်ထိုးဖြစ်တာပါ။ မျက်နှာကိုခေါင်းအုံးနဲ့ဖိကပ်ထားလို့တော်သေးတယ် ကျနော့်ပါးစပ်က ခပ်ပြင်းပြင်းအသက်ရှူသံနဲ့အတူ ညည်းသံလေးတွေထွက်မိတာကိုး။ တင်ပါးတွေ ကျစ်ကနဲ ကျစ်ကနဲဖြစ်ဖြစ်သွားသလို ငပဲတလျောက် လျှပ်စစ်ဓာတ်စီးဆင်းသွားသလို ခံစားမိရတဲ့ခဏ ကျနော့်လက်တွေကို ခေါင်းအုံးအောက်ထဲထိုးထည့်မိရင်း ခဏတော့ ငြိမ်သက်သွားမိပါတယ်။ သက်ပြင်းချသံ ခပ်ကျယ်ကျယ်ချလိုက်ရင်း အသက်၀၀ရှူလိုက်တာပေါ့နော်။ ဘာများဖြစ်သွားပါလိမ့်ပေါ့။ မတွေးတတ်ပါဘူး။”
"အိပ်ရာပေါ်ပက်လက်အနေအထားလှိမ့်လိုက်ရင်း ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်ငုံ့ကြည့်မိခဲ့တာကို သတိရတယ်။ ငပဲက မာနေဆဲဖြစ်သလို ပန်းသွေး ရောင်ရဲနေတာပဲ။ ညအိပ်ဘောင်းဘီတွေ အောက်ကိုလျှောကျနေတဲ့အနေအထားနဲ့ အိပ်နေတဲ့ ကျနော့်ကို အိပ်ခန်းထဲဝင်လာတဲ့ မိဘ တွေမိသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အတွေးကြောင်သေးတာကိုလည်း မှတ်မိသေးတယ်။ သိပ်တော့လည်း လိပ်ပြာမလုံတဲ့စိတ်မဟုတ်ပါဘူး လေ…အေးဆေးဖြစ်သွားတာပါပဲ။ (ဟား ဟား ဟား) နောက်တစ်နေ့လား…အဲ….နောက်ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာလည်း ကျနော်ထပ် လုပ်ဖြစ်သေးတယ်”
"သုက်ရည်လို့ မည်မည်ရရမဖြစ်ခင် တစ်နှစ်လောက်အထိ ကျနော်အဲ့သလိုပဲ လိင်အာသာဖြေတာလုပ်မိခဲ့တယ်ဗျ။ ကျနော့်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် ပြောင်းလဲချိန် လိင်အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ငှက်ကလေးတွေ ပျားကလေးတွေက အဖေ့ကိုပြန်ပြောမလား တွေးကြောက်ခဲ့မိသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့သူက မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့သလား သိသလားမသိ။ ကျနော့်အရွယ် ယောက်ျားကလေးတွေကော အရွယ်ရောက် ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းတွေစီကရော သူတို့ဘယ်လို အာသာဖြေကြတယ်ဆိုတဲ့ အကြားနဲ့တင် ကျနော် ဒါကို တတ်ခဲ့တယ်ထင်တယ် နည်းလမ်းတွေကိုလေ”
" ဒီတော့ "How I Learned to Masturbate"ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရရင် ရေချိုးကြွေဇလုံထဲမှာ ထိုင်နေရင် ကြေးတွန်းတဲ့အ၀တ်စိုတစ်ခု ကျနော့်ငပဲပေါ်တင်ထားရင် စခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပဲ။ နည်းနည်းတော့ ဂါတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်?’
" ကျနော်လိင်အာသာဖြေတာ ဘယ်လိုစသိခဲ့လဲ ဘယ်လိုစထိတွေ့ခဲ့လဲဆိုတာကို အရင်ဆုံးပြောရရင်တော့ နည်းနည်းတော့ မသိသား ဆိုးရွားပါတယ်။ ကျနော့်အသက် ၁၁နှစ်ခွဲ ဆယ်နှစ်နှစ်နီးပါးလောက်အရွယ်တုန်းက တိုက်ခန်းတစ်ခုမှာနေခဲ့တယ်။ အဲ့တိုက်ခန်းမှာ ကလေး တစ်ယောက်ရှိပြီးသား။ ကျနော့်ထက် နှစ်နှစ်လောက်ကြီးမယ်။ မတူမတန်တင်စီးတတ်၊ အမြဲလိုလို မကျေမနပ် ညည်းညူပြောဆို တတ်၊ စိတ်ထင်သလို အနိုင်ကျင့်တတ်သော အာရုံမျိုးကို ရှိရမယ်လို့ ပုံသွင်းထားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြီးပျင်းလာတဲ့သူ တစ်ယောက်လို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ ဒီလို မသိသာဆိုးရွားသော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို အတော်သည်းခံပြီးပေါင်းသင်းရတယ်ဆိုတာက ကျနော့် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရွယ်တူ မတိမ်းမယိမ်းကလည်းမရှိ ပေါင်းလို့ရမယ့်သူငယ်ချင်းဆိုလို့ သူပဲအိမ်ကပ်လျက်နေတာလေ။
"သူ့နာမည်က ဗညားလို့ခေါ်တယ်ဗျ။ သူကအရပ်မြင့်တယ်၊ အသားတော်တော်ဖြူတယ်၊ ဆံပင်ကလည်း ကောက်တိကောက်ကွေးနဲ့။ သူ့ခန္ဓာကိုအစိတ်အပိုင်းတွေကဆွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိသလို မျက်နှာကလည်း သိပ်မချောပါဘူး။"
"တစ်ရက်တော့ ကျနော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးတွေလည်းမရှိ လူရှင်းတဲ့အချိန်မှာ တိုက်ခန်းတွဲကြီးရဲ့ ၀င်ပေါက် ဟောလ်ကြီးထောင့်ချိုးတစ်ခုကို ကျနော့်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဗျ။ သူက သူ့ထက်ငယ်တဲ့သူတွေကို ဆရာကြီး အရမ်းလုပ်ချင် တာလေ။ အရာရာမှာသူပိုသိကြောင်း ဒါမှမဟုတ် သူက အခြားသူထက်ပိုပြီး သန်မာကြောင်း စသဖြင့် သက်သေပြချင်တာဆိုပါ တော့။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ သူ့အသက်က ဆယ့်သုံးနှစ်လောက်ရှိတော့မှာဆိုတော့ လူပျိုဖော်ဝင်တော့မလားမသိ လိင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိတွေ့ပတ်သက်မှုအကြောင်းတွေကို တစ်ခါတလေ အကြောင်းပြချက်မရှိ ကြွားချင်ပြောချင်သေးတာပါပဲ”
"ဗညားက မိန်းကလေးတွေနဲ့ လိင်ဘယ်လိုဆက်ဆံရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ သူဘယ်လောက်စွံကြောင်း သိကြောင်း ပြချင်တဲ့သဘောလည်းပါတာပေါ့လေ။ ကျနော့်ကို သည်အကြောင်းတွေပြောနေရင်းနဲ့ သူဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ ငပဲကို ကိုင်ကိုင်နေတယ်။ ကြည့်ရတာ တောင့်တင်းနေလို့ထင်ပါရဲ့။ ဗညားငပဲက ခဏခဏတောင့်တင်းနေတတ်တာဗျ။ နွေရာသီမှာ ရေကူးကန်ထဲ ရေကူးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဖြစ်တာပဲ။ ကလေးတွေက အချင်းချင်း မကြာခဏဆိုသလို နာမည်ပြောင်တွေခေါ်ကြ တာ မခံချိမခံသာဖြစ်အောင်ပြောတတ်ကြတာကို သိတယ်မဟုတ်လား? သူ့နာမည်ပြောင်က “ဘောကြီး ဗညား” တဲ့ဗျ။ သူ့အကိုအရွယ် လူငယ်တွေလို အသက်ပိုကြီးပြီး ထွားကြိုင်းတဲ့ကလေးတွေကလွဲလို့ သူ့ထက်အသက်ငယ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ညှက်တဲ့ကလေးတွေက အဲ့ဒီနာမည်ကို မခေါ်ရဲမစရဲကြပါဘူး။ ဗညားက တွန်းထိုး လက်သီးနဲ့ထိုးပြီးတုန့်ပြန်တတ်တာကိုး။ အဲ့တာကြောင့် ကိုယ်တွေထက်ကြီးတဲ့ အကိုတွေက ဗညားကိုစနောက်ရင် ကျနော်တို့တွေ ကြည့်ပြီးအားရ၀မ်းသာဖြစ်နေရတာ”
"ဗညားကို သူ့ပြောစကားတွေထဲပါနေတတ်တဲ့ လိင်အာသာဖြေ(-ွင်းထု)တာ ဘယ်လိုလည်းလို့မေးကြည့်တော့ ‘ငါဘာတွေ ဘယ်လို လုပ်ရတယ်ဆိုတာပြောပြလဲ မင်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ…မြေအောက် ကားဂိုထောင်ဘက်လိုက်ခဲ့ ငါလုပ်ပြမယ်’ လို့ပြောတယ်ဗျ။”
"ကျနော်တို့နေတဲ့တိုက်ခန်းတွဲကြီးမှာက အိမ်စီးကားတွေကို မြေအောက် Basement ထဲထားဖို့စီစဉ်ထားတာကြောင့် နေ့ခင်းပိုင်းတို့ ညပိုင်းတို့ဆိုရင် လူသိပ်မရှိပါဘူး။ ဗညားခေါ်ဆောင်ရာ လှေကားအတိုင်းဆင်းလိုက်သွားရင်း နည်းနည်းချောင်ကျတဲ့ ထောင့်တစ်ထောင့် ကိုသွားကြတယ်။ ‘ကဲ မင်းငပဲကို ငါ့ကိုပြစမ်း ကြည့်ရအောင်’ လို့ သူပြောလည်းပြော ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီ ကြယ်သီးတွေကို ဖြုတ် ဇစ်ကိုဖွင့်ကာ သူ့လက်ကြီးက အတွင်းခံဘောင်းဘီထဲနှိုက်တယ်ဗျ။ သူလုပ်နေတာတွေကြောင့် ကျနော်သာယာမှုမဖြစ်ဘဲ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ထင့်နေရော တစ်ယောက်ယောက်များ ကားဂိုဒေါင်ထဲဆင်းလာရင် မိသွားနိုင်တာကိုး။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် မြင်ကွင်းက လုံးလုံးလျားလျားပျောက်ကွယ်နေတာ မဟုတ်တော့လေ။”
"ဗညားက ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ကျနော့်အတွင်းခံဘောင်းဘီကို အောက်ဆွဲချရင်း ညာဘက်လက်နဲ့ငပဲကိုကိုင်ပြီး ကစားတယ်ဗျ မာလာ အောင်လုပ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။ သတိလွတ်သူလို နှိုးဆွနေတဲ့ဆီအာရုံမကပ်ဘဲ သူ့ကိုကြည့်နေမိတာကြောင့် ငပဲက မာတောင့်မလာ ပါဘူး။ ဗညားက ဒါကိုလက်မလျော့ဘဲ ဆက်လက်ပွတ်သပ်ကစားနေသလို ‘မင်းဟာက သိပ်မကြီးဘူးနော်’ တဲ့ ပြောသေးတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ အရွယ်ရောက်လူကြီးတွေလောက်တော့ ၇လက်မနီးပါးရှိပါ့မလား။”
"မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ဆက်လုပ်ကြည့်ပြီးမှ ဗညားလက်လျော့သွားကာ ‘ကဲ…ငါ့ကိုကြည့် ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာပြမယ်’တဲ့။ ခပ်သွက်သွက်ပဲ သူ့ဂျင်းဘောင်းဘီကိုချွတ် အတွင်းခံဘောင်းဘီကို အောက်ကိုဆွဲချရင်း မတ်မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကိုအပြင် ဆွဲထုတ်တယ်။ ကျနော်အခုထိမှတ်မိတုန်းပဲ ဘယ်လိုပုံစံလည်းဆိုတာ။ ရှည်တာတော့တော်တော်ရှည်တာ…သိပ်တော့မတုတ်ဘူး… အကြောတွေ နည်းနည်းထောင်နေတယ်။ ငပဲကြည့်ရတာ ဘယ်ဘက်ကိုနည်းနည်းကောက်နေသလားလို့။ သူ့ငပဲခေါင်းက ပန်းသွေး ရောင်ရဲနေတာပါပဲ သူ့အသားအရေဖြူလို့လားတော့မသိလေ။ ကျနော့်ငပဲခေါင်းလို လုံးဝန်းမနေဘဲ နည်းနည်းပြားနေသလို ဆိုတော့ နည်းနည်းကြည့်လို့ဆိုးတဲ့ ပုံစံကြီးဗျ။’
"ကျနော့်နံဘေးမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း တန်းလန်းတန်းလန်းနဲ့ ဗညားရဲ့ငပဲကိုကြည့်လိုက်တော့ သူ့ငပဲအပေါ်ပိုင်း ဆီးစပ်မှာ အမွှေးအမျှင် အချို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ လူကြီးတွေရဲ့ ဆီးစပ် အဲသည့်နေရာမှာ အမွှေးအမျှင်တွေရှိတာကို ကျနော်သိပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဆီးစပ်မှာလည်းရှိတာကို အရင်ကမမြင်ဖူးဘူးလေ။ အများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ခပ်စုစုလေးရှိနေတဲ့ပုံက ကျနော့်အတွက်ဆွဲဆောင်မှုသိပ်မရှိ လှပါဘူး။ ဗညားရဲ့ ဆီးအိမ်က ခပ်တွဲတွဲနဲ့ ကျနော့်ဟာနဲ့ လာယှဉ်နေသလိုပဲဗျ”
" ငါ့လို လုပ်(-ု)လေကွာ' ဗညားက လက်မကိုအပေါ်ထား အခြားလက်ချောင်းလေးတွေကို အောက်မှာထားကာ သူ့ငပဲကို အားရပါးရဆုပ်ကိုင်ရင်း လက်ကစားနေတာဗျ။ ကျနော်ကလဲ သူလုပ်သည့်အတိုင်း ထပ်တူလိုက်လုပ်ပေမယ့် သိပ်တော့ စိတ်အား ထက်သန်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရပါမယ်။ ရာနှုန်းပြည့်မာတောင့်တာမျိုးမဟုတ် မမာ့တမာ အနေအထားဖြစ်လာတဲ့ ကျနော့်ငပဲကို ဗညားက စိုက်ကြည့်နေတယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေ အကြည့်တွေပြောင်းလဲလာသလို သူ့အသက်ရှူသံကလည်း ပိုမိုကျယ်လောင်လာတာ ကျနော် သတိထားမိတယ်။”
" 'ကြည့်…ကြည့်….ငါ..ငါ ပြီးတော့မယ်' ဘာတွေဖြစ်ပျက်လာမလဲဆိုတာ ကျနော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဗညား သူ့ငပဲကိုငုံ့ကြည့်ပြီးပြောနေ တာဆိုတော့ ကျနော်လည်းငုံ့ကြည့်မိတာပေါ့။ မာတောင့်နေတဲ့ သူ့ငပဲကို ဗညားလက်ကစားနေတာ တော်တော်မြန်တယ်ဗျ။ ဘယ်လို ပြောပြရမှန်းမသိတဲ့ အော်ညည်းသံ သူ့ပါးစပ်က တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ထွက်လာပြီးနောက် အဖြူရောင်အရည်ကြည်တွေဟာ ဖုန်တွေ လွှမ်းနေတဲ့ အင်္ဂတေကြမ်းပြင်ပေါ်ကို နှစ်လျော့လောက် ဗြန်းကနဲ ဖြန်းတယ်”
" ဗညားက သူ့ငပဲထိပ်ဝက အရည်ကြည်တွေကိုပြောင်အောင်သုတ်သင်ပြီးနောက် လက်အစုံကို ကျနော့်မျက်နှာနားတိုးကပ်ပြကာ ‘ ကြည့် ဒါ လရည်တွေပဲကွ….မိန်းမတစ်ယောက်ကို လုပ်(-ိုး)ရင် ကလေးရစေတဲ့ဟာတွေပဲ’တဲ့။ ကျနော်ဘာစကားမှတုန့်ပြန်မပြောနိုင် ‘အိုး..’ လို့ပဲရေရွတ်မိတော့တယ်လေ။ ‘မင်းလည်း လုပ်(-ု)လို့ရပေမယ့် အသက်နည်းနည်းကြီးလာမှ ငါ့လို သုက်ရည်ထွက်နိုင်မှာ’ သူပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးနောက် ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်ကိုင်ကစားနေတာကို ကျနော်ရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ‘မင်း ညကျမှ လက်တွေ့ စမ်းလုပ်ကြည့်’ လို့ ဗညားကပြောရင်း ပျော့ပြောင်းစပြုနေတဲ့ သူ့ငပဲကိုအတွင်းခံထဲပြန်ထည့် ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဝတ် ဇစ်ဆွဲလိုက်တယ် လေ။ ကျနော်လည်း ဘောင်းဘီပြန်ဝတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ ကြမ်းပြင်မှာအကွက်စိုလေးဖြစ်နေတာတွေကို ဗညားက သူ့ဖိနပ်နဲ့ပွတ်သပ် ဖျက်ပြုပြီး ‘သွားစို့’ ဆိုတာနဲ့ ကားဂိုထောင်ကနေပြန်လာဖြစ်ကြတယ်ပေါ့”
"ဒါဟာ ကျနော် လိင်အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စကို ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့သလဲဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ့်ဖာသာလည်း တစ်ခါတလေလုပ်ကြည့်ဖြစ်သလို အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းအချို့နဲ့ တောထဲအလည်သွားရင်း အကြိမ်နည်းနည်းလောက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တိတ်တခိုးလုပ်ကြတာပေါ့လေ သိသာသိမမြင်စေနဲ့ပုံမျိုးပေါ့။ ဗညားနဲ့တော့ ကျနော် အတူတူမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ အင်း ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ...ခြောက်တန်းရောက် ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ပုံမှန်သဘောလေး လက်ကစားဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုနှစ်တန်းနှစ်ဝက်လောက်ရောက်မှ ပြီးတဲ့အထိ အရည် ထွက်တဲ့အထိ လုပ်တတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျာ”
"အိုကေ..အိုကေ….ကျနော် လိင်အာသာဖြေ (-ွင်း) တာဘယ်လိုလုပ်ရလဲ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက် ခင်ဗျားကို ပြောပြပါ့မယ်” ကျနော်က နယ်စပ်ဘက်ကလာတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားသိတယ်နော်။ ကျနော်တို့ ဘယ်ကိုသွားချင် သွားချင် ဆိုင်ကယ်နဲ့ပဲလှည့်ပတ်သွားနေရတာဗျ။ တော်တော်ပျင်းရိဖို့ကောင်းတာပဲဗျာ။ ကျနော်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အဖေ့ကြက်ခြံထဲက ကြက်ကလေးတွေကို ကြက်စာကျွေးကူရတယ် လေ။ အသက်အရွယ်နည်းနည်းကြီးလာတော့ ခြံကာထားတဲ့စည်းရိုးတွေ စစ်ဆေးတာတို့ အခြားကြည့်စရာ စစ်စရာတွေကို အိမ်ကမွေး ထားတဲ့မြင်းကို လှည့်ပတ်စီးပြီး ပတ်ရတာပေါ့နော်”
" ကျနော် အသက် ၁၄နှစ်လောက်ရောက်တော့ အရပ်စပြီးရှည်ထွက်စပြုလာပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲတာလဲမြန် အရပ်ရှည်တာလည်း မြန်ဆန်စပြုတဲ့ကာလဆိုတော့ ၀တ်နေကြ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ အင်္ကျီတွေနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေတော့တာကြောင့် အသစ်တွေဝယ်ရတော့ တာပေါ့ဗျာ။ ဆောင်းကုန်ပြီး နှစ်လလောက်နေတော့ ကျနော့်ပေါင်ကြားက ညီဘွားက ပိုပိုပြီးထွားလာသလိုပါပဲ။ ကျွဲ နွားတွေ မြင်းတွေကို လူတွေ ဘယ်လိုမျိုးပွားပေးတယ်ဆိုတာသိသလို လိင်ကိစ္စတွေကိုလည်း ကျနော်ရိပ်မိသိနေပေမဲ့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး။”
"ဧပြီလရဲ့ နောက်ဆုံးအပတ် ပူနွေးနေတဲ့ရက်တစ်ရက်မှာ ခြံစည်းရိုးတွေကို ထုံးစံအတိုင်း စစ်ဆေးဖို့ ကျနော်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ကျနော် ၀တ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီကလည်း ဟိုပြဲသည်ပြဲနဲ့ အတွင်းကပစ္စည်းတောင်နှိုက်ထုတ်လို့ရတယ်။ ဘောင်းဘီအသားစက ခပ်ကြမ်း ကြမ်းနဲ့ ကျနော့်ငပဲကို ပွတ်သပ်နေသလိုဖြစ်တာကြောင့် ငပဲကလည်းမာတောင့်လာတာပေါ့လေ။ ၀တ်ထားတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီစက အပေါ်ကထိပွတ်နေတာကို ခံစားနေရတာကိုး။ မြင်းက လှုပ်ပြုလိုက်တိုင်း ရှေ့နောက်ရွေ့လျားလိုက်တိုင်း လိင်တံထိပ်အရေပြားကို နောက်ပြန်ပြန်ဆွဲ ရှေ့တိုးဆိုတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေတော့ ငပဲခေါင်းကို လှုံ့ဆော်သလိုဖြစ်နေတာလေ။ ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုပြီးနှိုက်ကြည့်လိုက် တော့ ငပဲက ပူနွေးနေတာပဲ။ အဲဒါနဲ့ ငပဲကို ဂျင်းဘောင်းဘီဘယ်ဘက်ခြမ်းထဲစောင်းထည့်လိုက်တယ် မြင်းကျောကုန်းနဲ့ ကျနော့်ပေါင် ကြားညှပ်ထားသလိုအနေအထားပေါ့။ အရင်က မရိုးမရွခံစားရတဲ့ ဖီလင်ထက်ပိုမိုက်တယ်ဗျ။ ကျနော့်ငပဲလည်း အစွမ်းကုန်မာတောင့် လာသလို ဂျင်းဘောင်းဘီထဲမှာတင် အပွတ်အသပ်အထက်အောက်ကစားတဲ့ဟန်မျိုးဖြစ်ဖြစ်သွားရော။ ခဏနေတော့ သုက်ရည်တွေ ပွက်ကနဲထွက်သွားတာကို ကျနော်ခံစားမိလိုက်ပါတယ်။”
"အဲ့သည့်အချိန်လေးက ကျနော် အသက်ကိုအငမ်းမရရှူလိုက်ရသလို ခံစားရတယ်။ ဘာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ကျနော် မြင်းပေါ်ကဆင်းကာ ၀တ်ထားတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ ကျနော့်ငပဲခေါင်းက ချောကျိကျိ ဖြစ်နေသလို ပေပွနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ထိပ်အရေပြားကိုနောက်ပြန်ဆွဲ အရည်လက်ကျန်ကိုညှစ်ထုတ်ကြည့် ပြန်လွှတ်လိုက်ရင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ကျနော့်သုက်ထွက်မှုကို ဆန်းစစ်ရပါရဲ့။ ကျနော့်ငပဲက ပျော့သွားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ကိုင်ညှစ်ကြည့် ပွတ်သက်ကြည့်တော့ မိုက်တယ်….နည်းနည်းလောက်ပြန်မာလာသလိုပဲ”
"ကျနော် ငပဲကိုဘောင်းဘီထဲပြန်ထည့် မြင်းပေါ်တက်ကာ ခြံစည်းရိုးအစပ်က စမ်းချောင်းတစ်ခုရှိရာ ဦးတည်လိုက်တယ်။ မြင်းကို သစ်ပင် တစ်ပင်မှာ ချည်နှောင်လိုက်ပြီး မြင်ခင်းပေါ်အသာထိုင် ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖွင့် ငပဲကိုဆွဲထုတ် ငပဲခေါင်းပေါ်က ထိပ်အရေပြားနဲ့စအလုပ်ရှုပ် တော့တာပါ။ ရုတ်ခြည်းဆိုသလိုပဲ ကျနော့်ငပဲဟာ ပြန်ပြီးမာတောင့်လာပါတယ်။ အဲ့ငပဲကိုထိကိုင်ရတာက ပထမဆုံးအကြိမ်က ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးပဲ ရင်ခုန်ရပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာ တွေးထားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန် ခံစားရတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေ တစ်ချိန်တည်းလိုလိုရောထွေးနေတာ အတော်ထူးဆန်းတယ်။ စက္ကန့်သုံးဆယ်လောက်အကြာမှာတော့ ပမာဏ နည်းများတဲ့ သုက်ရည်ပွက်ကနဲ ထွက်လာသလို နောက်ထပ် အရည်အနည်းငယ် နှစ်ခါပန်းထွက်လာတယ်။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကြာပြီးတော့လည်း ကျနော်ထပ်ပြီးကြိုးစားကြည့်ပါသေးတယ်။ အထိအတွေ့သာယာပေမယ့် ထပ်မထွက်လာတော့ဘူး။ ကျနော့်ငပဲဟာ မြင်းစီးရင်း ပွတ်သပ်တာရော အခုလက်ကစားတာရောကြောင့် နည်းနည်းနာသလို ဖြစ်နေတယ်လေ။”
"ဒါပဲလေ ကျနော် လိင်အာသာဖြေတာကို ဘယ်လိုသင်ယူတတ်မြောက်ခဲ့လဲဆိုတာ' ကျနော် ပေါင်ကြားက ငပဲခေါင်းထောင်ထလာရင် ဖုံးကွယ်ဖို့ခက်တဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီခပ်ကြပ်ကြပ်ဝတ်ပြီး နောက်ထပ်နှစ်ကြိမ်လောက် မြင်းစီးဖြစ်သေးတယ်ဗျ။ အစကတော့ဘာမှမဟုတ် ဘူးလေ နောက်ကျတော့ မြင်းစီးတာကိုရပ်ပြီး လက်ကစားတာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သတ်သွားတာ။ ဆောင်းတွင်းနဲ့ နွေရာသီတွေဆိုရင်တော့ ခြံစည်းရိုးတွေ စစ်ဆေးဖို့ ကျနော် မြင်းစီးဖြစ်ပါသေးတယ် အခုလည်း (ဟား ဟား ဟား)”
“ကျနော့်အသိ အကိုကြီးတစ်ယောက်လုပ်ပြခဲ့တာဗျ။ ကျနော့်အသက် ဆယ်သုံးနှစ်၊ သူ့အသက် ၁၅နှစ်လောက်တုန်းကလေ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်သား ကစားကွင်းတစ်ခုသွားလည်ကြတဲ့အချိန်ထင်တယ်။ သူက ကျနော် လိင်အာသာဖြေ(-ွင်း)တာလုပ်တတ်လားမေးတယ်။ ကျနော်က မလုပ်တတ်ဘူး မလုပ်ဖူးသေးဘူးပေါ့။ သူက သစ်ပင်တွေနောက်ကိုသွားရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာပြမယ်တဲ့။ ကျနော်တို့ လူရှင်းတဲ့သစ်ပင်တွေနောက်ကိုလည်းရောက်ရော ‘ငါတို့-ီးတွေအပြင်ထုတ်ကြစို့’တဲ့။ သူ့ငပဲကိုအရင်ဆွဲထုတ်နေတော့ ကျနော်လည်းလိုက်ထုတ်တာပေါ့နော်။ လက်ဘယ်လိုကစားရတယ် အထက်အောက်ဘယ်လိုလှုပ်ရှားရတယ်ဆိုတာ သူနည်းပြတယ်။ ကျနော်လည်း လိုက်တုပြီးလုပ်တာပေါ့။ သူ ပြီးကာနီးအချိန်ကျတော့ ခပ်တိုးတိုးညည်းသံနဲ့အတူ သုက်ရည်တွေကိုပန်းထုတ်တာ ကျနော့် ငေးကြည့်မိနေရော။ သူ့ငပဲကိုဘောင်းဘီထဲပြန်ထည့်လိုက်တယ် တစ်ရှူးနဲ့သန့်စင်ပြီးချိန်မှာ။ ကျနော် နည်းနည်းတော့ကြိုးစားကြည့်လိုက် သေးတယ် ပြီးမှ ဆက်မလုပ်တော့တာ။’
“တစ်ဘ၀လုံးလိုလို ကျနော် လိင်အာသာဖြေခဲ့တာပါပဲ။ အဲ…ကျနော်ဆိုလိုတာက လူပျိုဖော်မ၀င်ခင်ကတည်းကလို့ပြောရမယ်နဲ့တူတယ်။ ဘယ်အချိန်ကစလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်မမှတ်မိဘူးဗျ။ အသက်ငါးနှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက အိပ်ရာထဲမှာကျနော်လုပ် တတ်နေခဲ့တာ။ အိပ်ခန်းထဲဘယ်သူမှမရှိချိန်ဆိုရင် အ၀တ်တွေအားလုံးချွတ်ပြီး ကိုယ့်ငပဲကိုယ်ကိုင်ကစားနေတတ်ခဲ့တာလေ။ တီဗီကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ဘောင်းဘီထဲလက်နှိုက်ပြီး ငပဲကိုကိုင် သာယာနေတတ်တယ်။ ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သဘောကျ ပျော်ရွှင်နေတတ်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ အသက်အရွယ် ၇နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အထိ ကျနော် ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြဘဲ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့တာပါ။”
" အိမ်နီးနားချင်း ရွယ်တူယောက်ျားလေးတွေ စုကစားဖြစ်လို့ လူလစ်ပြီဆိုရင် ကိုယ့်ဟာသူ့ဟာပြကြ၊ သေးပန်းတာအဝေးရောက်ပြိုင်ကြ၊ လက်ကစားတာ ပွတ်သက်လှုပ်ရှားတာတွေလုပ်ကြနဲ့ ကားပျက်တွေစုထားတဲ့ဝန်းထဲသွားလုပ်ကြာတာပေါ့နော်။ ဖီလင်က တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျ။ ကျနော် သုက်ရည်လည်းမထွက်နိုင်သေးဘူး၊ အဆုံးသတ်ခံစားချက်မျိုးလည်း မရသေးဘူးလေ အသက်က ၁၄နှစ် ၁၅နှစ်မှ မရောက်သေးတာ။ ကျနော်တို့စုကစားကြတဲ့အုပ်စုထဲမှာ အချို့ကောင်တွေကတော့ သုက်ရည်ထွက်တဲ့အထိဖြစ်ကြတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ငပဲနဲ့ကို ကစားနေရတာကိုနှစ်သက်နေခြင်းသက်သက်ပါပဲ။”
(သုက်ရည်ထွက် ပြီးတဲ့အထိ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကျတော့ ဘယ်အချိန်မှာတတ်ခဲ့တာလဲ?)
"အဲ….ကျနော် ဆယ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်က ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ငနဲတစ်ပွေနဲ့လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ သူရယ် ကျနော်ရယ်ပဲ မဟုတ်ဘူး လေးငါးယောက်လောက် ကျောင်းက အ၀တ်လဲခန်းအနောက်ဖက်မှာ စုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဗျ။ သူငယ်ချင်းတွေစုလုပ်ကြတဲ့ အချိန်တိုင်း သူမပါနိုင်ပါဘူးလေ သူက အခြားကျောင်းမှာတက်တာကိုး။ ကျနော်တို့ ကားထားတဲ့ မြေအောက်တိုက်တွေလို လူပြတ်တဲ့ တိုက်တန်းလမ်းကြားတစ်ခုခုထဲ မကြာခဏလုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ ကျနော်နဲ့သူနဲ့ အတူတူ လိင်အာသာဖြေကစားကြတာ တစ်နှစ်လားမသိ ဒီထက်ပိုချင်လည်းပိုမယ် ကြာတဲ့အချိန်ကြမှ သုက်ရည်ထွက်တဲ့အထိ ဖြစ်တာဗျ”
‘ကျနော် ဘယ်လိုလုပ်တတ်ခဲ့လဲ? ကိုယ့်ဘာသာပဲကိုလုပ်တတ်ခဲ့တယ်ပြောရမယ်။ ကျနော့်အသက် ဆယ့်သုံးနှစ်လောက်က ခြင်္သေ့နဲ့ ကျားလှောင်အိမ်တွေဘက်ကို အမြဲသွားသွားကြည့်ပြီး အထက်လူကြီးကို အစီရင်ခံရတဲ့အလုပ်ကို တိရစ္ဆာန်ရုံမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့။ ကျနော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာ အိပ်ခန်းထဲမှာ ပြီးတော့ ခြင်္သေတွေမိတ်လိုက်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေ သုံးလေးပုံလောက် သိမ်းထားတာရှိတယ်။’
" ကျနော် စိတ်လှုပ်ရှားလာတာနဲ့ ငပဲက မတ်လာရော။ အဲ့လိုဆိုရင် ဘောင်းဘီထဲကငပဲကိုအပြင်ထုတ် အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့လေ။ အခုအသက်အရွယ်မတိုင်ခင်က ပြောခဲ့သလို မတ်မတ်လာတိုင်း လိင်အာသာဖြေတဲ့လက်ကစားမှုအဆင့်ထိ မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုင်ပြီး ပွတ်သပ်ရုံလေးပဲလုပ်တတ်ခဲ့တာလေ။ ကိုင်ပြီးပွတ်သပ်တဲ့ဖီလင်ကလည်း မဆိုးဘူးဗျ။ ကျနော့်ငပဲကို ကိုင်တယ်….လှုပ်ရမ်းတယ်…ကစား တော့ ဓာတ်ပုံတွေထဲကလို မာတောင့်လာတာများ အစွမ်းကုန်ဗျို့။”
"ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အခုအချိန်မှာတော့ မတူတော့ပါဘူး။ ကျနော်ဆိုလိုတာက စိတ်ဝင်စားတာတွေ စိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်တာတွေ ကိုပြောတာပါ။ ဇာတ်ကြောင်းပြန်ပြောရရင် ဖြစ်ခဲ့တာက လိင်စိတ်ခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ စိတ်လှုပ်ရှား တာကိုခံစားခဲ့ရတာသက်သက်ဖြစ်မယ်။ ၀တ်ထားတဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုချွတ် ထိုင်နေတဲ့ ကုလားထိုင်ကနေခုန်ထ ပြီးတော့ ပေါင်ကြားက ညီဘွားကို ထိကိုင်လှုပ်ရမ်းကစားတာ ဟား ဟား။ ကျနော့်အသက် ဆယ့်နှစ်နှစ်လောက်ထိ ဆီးစပ်မှာအမွှေးအမျှင်တစ်မျှင်မှမပေါက် သေးဘူး။”
"ခြင်္သေ့ထီးကြီးက အမတစ်ကောင်ပေါ်နောက်ဘက်ကနေ လေးဘက်ထောက်တက်တဲ့ ပုံစံကို စိတ်ထဲမြင်ယောင်ပြီး ကျနော့်အိပ်ခန်းထဲ က ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုမှောက်ချပြီး ကလော်ပွတ်ပွတ်တာ။ အမွှေးထူထူ ကော်ဇောရဲ့အထိအတွေ့က တကယ်မိုက်တယ်။ ဘယ်လိုခံစား ချက်မှန်းမသိ စိတ်ထဲ တသိမ့်သိမ့်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်ကို စောင်းငဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ မမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျနော်က အခြား တစ်ဘက်ကိုလှည့်မှောက်နေသလိုအနေအထားဖြစ်နေတာကိုး။ ကွန်ပျူတာ screen ကိုမြင်ရဖို့အတွက် ကော်ဇောပေါ်မှောက်နေရာက နေ ရုတ်ခြည်းဆိုသလိုထရပ်ပြီး ထိုင်ခုံဘေးနားသွားလိုက်တယ်။”
"ကျနော် ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီကို ဒူးအထိလျောချ၊ ပြီးတော့ ထိုင်ခုံဘေးတိုက်အနေအထားနဲ့ငပဲကို ဖင်ထိုင်နေရာပေါ်တင်ထားလိုက် တယ်။ ထိုင်ခုံက လက်ရန်းမရှိဘူး နောက်မှီပဲပါတာလေ။ ခြင်္သေ့ထီးက သူ့ခါးကိုလှုပ်ရှားဖို့အဆင်သင့်အနေအထားပုံစံအတိုင်း ကျနော် လိုက်အတုခိုးမိသလားပဲ။ ခုံအောက်ခြေက ဘီးလေးတွေတပ်ထားတာဆိုတော့ ကျနော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားတိုင်းအလိုက်သင့်ရွေ့နေတော့ တာပေါ့။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မှောက်ပြီး ကော်ဇောနဲ့ပွတ်သပ်နေတဲ့ အနေအထားထက်စာရင် အခုပုံစံက ကျနော့်တင်သားဆိုင်တွေကို အားရပါးရ လှုပ်ရှားရအဆင်ပြေစေပါတယ်။”
"ခြင်္သေ့တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ ခြင်္သေ့မ မျက်နှာမူဟန်က အသွင်းခံရပြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီး ခြင်္သေထီးတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကို ကြည့်လိုက်တော့ သန်မာတဲ့ကြွက်သားများနဲ့ အားမာန်အပြည့်လှုပ်ရှားနေဟန်ပေါက်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့အပြင် ခါးအစုံကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့ပြီး ခုံစောင်းပေါ်ငပဲကိုတင်ကာ လက်နဲ့အုပ်ကိုင်ထားတဲ့အနေထားထဲ ထိုးသွင်းချင်စိတ်ကိုဖြစ်စေပါရော။ ကျနော့်ငပဲ က တဖြည်းဖြည်း ဖောင်းကြွကြီးထွားလာပြီး ပွတ်သပ်ထိုးသွင်းရတဲ့ ခံစားချက်က ပိုပိုကောင်းလာတယ်ဗျ။ မြင်နေရတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထဲက လို လုပ်နေမိမှန်း ရိပ်စားရပေမဲ့ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက လိင်အင်္ဂါထိုးသွင်းဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စကိုသေချာမသိသေးဘူး။ နောက်ဆုံးဓာတ်ပုံကြီးက သိသိသာသာကို ဘာဖြစ်နေမှန်းပြောနေသလိုပဲ။ ခြင်္သေထီးကြီးက ပါးစပ်ကိုအကျယ်ကြီးဟရင်း ဟိန်းဟောက်နေတာဆိုတော့ သူ့ကိစ္စ ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ ကျနော်သူ့ကို အတုခိုးလိုက်လုပ်မိနေရင်းလုပ်တာ အချိန်မကြာသေးပေမဲ့ တင်သားဆိုင်တွေလှုပ်ရမ်းတာမရပ်တန့် မိတော့ပါဘူးလေ။ လက်တစ်ဖက်က ခုံအမှီပေါ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆုပ်ကိုင်ရင်း နောက်တစ်ဖက်က ငပဲကိုသေချာဖိပြုထိန်းကိုင်ရင်း တင်သားဆိုင်တွေ လှုပ်ရမ်းတဲ့အထိ ခါးကိုကစားရင်း ဖီလင်ကိုအပြည့်ခံစားမိပါတယ်။ ကျနော့်ငပဲနဲ့ ရွှေဥတွေကြား တစ်ခုခုဖြစ်လာတာကို ခံစားရသလိုလို အထိအတွေ့က ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိပါဘူးဗျာ”
"လူကို တဆတ်ဆတ်တုန်သလိုဖြစ်သွားပြီး ပါးစပ်ကလည်း ခပ်ကျယ်ကျယ်အော်ညည်းရင်း သုက်ရည်အများအပြား ခုံအခင်းပေါ်ကိုဖြန်း မိပါတယ်။ ငပဲကြီး မတ်နေတာ ပြန်မလဲသွားခင်အထိ ကျနော် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို ခြေပစ်လက်ပစ်လှဲလျောင်းလိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ထထိုင်လိုက်ပြီး ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်ငုံ့ကြည့်မိတာပေါ့လေ။ လိင်တံထိပ်အရေပြားလည်း ဆွဲပြုထားတော့နီရဲနေတာပဲ ငပဲခေါင်း ဒစ်ပေါ့လေ ပေါ်ဖို့နောက်ပြန်မဆွဲအားသေးဘူး။ အဲ…၁၃ ၁၄နှစ်ဆိုတော့ ထိပ်အရေပြားကို နောက်ထိကောင်းကောင်းဆွဲလှန်လို့အဆင်မပြေသေး တာလည်းပါပါတယ်။”
"ဒါပါပဲဗျာ…လိင်အာသာဖြေ(-ွင်း)လုပ်တာကို ဘယ်လိုတတ်မြောက်ခဲ့လဲဆိုတာ။ မကြာခဏဆိုသလို ခြင်္သေ့တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံ ပြန်ပြန်ကြည့် ဖြစ်သလို ထိုင်ခုံစောင်းကိုအသုံးပြုပြီး ကစားတာလည်း အတူတူပါပဲ။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ့်ငပဲနဲ့ ကစားတာကို တတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဆိုရမယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခုံကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ရတာ မသက်မသာနဲ့လေ။”
“လိင်တံ(-ီး) မာမာတတ်လာတာကို ကျောင်းတက်နေတုန်းသတိထားမိခဲ့တာဗျ။ စာရေးစာပွဲခုံနဲ့ ထိုင်တဲ့ခုံက ကပ်ကပ်လေးဆိုတော့ ကျနော့်ငပဲ မတ်ပြီးထောင်လာတဲ့အချိန်ဆို ဟိုဟိုသည်သည်ဖုံးဖိဖို့ အမူအယာပျက်စရာမလိုခဲ့ဘူးလေ။ မျက်နှာကိုမှင်သေသေထားပြီး လက်က ပုဆိုးကြားလက်လျှိုရင်း ငပဲကိုနှိုက်လို့ရတယ်။”
" ကျနော် ညနေစောင်းလောက်က တီဗီကြည့်နေခဲ့တယ်။ ဖိုက်တင်တွေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပစ်ခတ်တာတွေပါတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ကျနော် သဘောကျတယ် ‘G.I. Joe Extreme’ လိုလေ။ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေ ဆော့ကစားတဲ့အချိန်ဆိုရင် တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်က ပုံဟန်အတိုင်း ခုန်ပေါက်လိုက်၊ ဖိုက်တင် play လိုက်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ များသေားအားဖြင့် ကျနော် ကိုယ့်ဖာသာကစားနေတတ်ခဲ့တယ်ပေါ့”
"တစ်ကြိမ်မှာတော့ သေနတ်တွေ အမြှောက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်လို့ ပေါက်ကွဲတဲ့ဟန် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကိုလွင့်စင်လဲကျတဲ့ဟန် သရုပ်ဆောင် တမ်း ကစားပါတယ်။ စိတ်ထဲကတော့ တကယ့်တိုက်ပွဲကြီးထဲရောက်နေသလိုပါပဲ ဆိုဖာကူရှင်လက်ရန်းပေါ်ပစ်လှဲလိုက် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို မှောက်လှဲလိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ လက်ရန်းပေါ်ကို ဖိဖိခွလိုက်တိုင်း ကျနော့်ပေါင်ခွဆုံက ငပဲမာမာလာတာကို သတိပြုမိပါတယ်။ အစကတော့ ကစားနေတာပေါ့လေ…နောက်ပိုင်းကျတော့ ပေါင်ခွဆုံနဲ့ထိခတ်မယ့်အနေအထားတွေကို ရွေးရွေးလုပ်မိနေတယ်လေ။ ကျနော်က ခုန်ကစားလိုက် ဆိုဖာလက်ရန်းပေါ်မှောက်လိုက်နဲ့ ကမြင်းနေတာ အမေရဲ့ ‘မျိုးအောင်….သား…အိမ်ကိုဆူညံနေအောင်မလုပ်နဲ့လေ။ ငါပြောသလို တိတ်တိတ်ကစားစမ်း’ လို့အော်လိုက်သံကြားရတဲ့အထိပါပဲ”
"ကျနော့်အထင် ဒီလိုတွေကစားပြီးမကြာခင်သော ရက်အနည်းငယ်မှာ ပထမဆုံးသော ပြီးဆုံးခြင်း ခံစားမှုကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ စိတ်အရမ်း လှုပ်ရှားပြီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဗျာ”
"ကျောင်းတက်ရတဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သော သောကြာနေ့ နောက်ဆုံးအတန်းချိန်မှာ ကျနော် နာရီတကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေမိတယ်။ ဘယ်အချိန် အတန်းချိန်ပြီးဆုံးမလဲ ကျောင်းဆင်းလွှတ်မလဲပေါ့။ တီဗီကြည့်ချင်လှပြီလေ။ ထိုင်နေရင်းနဲ့ ငပဲကမာလာတာဗျ။ အစကတော့ လက်တစ်ဖက်နဲ့ မသိမသာဖိချတာပေါ့ ပြန်ပြီးကျသွားမလားလို့။ လိင်တံထိပ်အရေပြားအောက်က ဂလင်းတွေ လှုပ်ရှားလာတာကို ခံစားမိ ရသလို ဆီးအိမ်ထဲက ဥနှစ်လုံးကလည်း ယားယံတာလိုလို ထူးဆန်းတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်နေတယ်။ ကျနော့် ပေါင်ခွကြားမလည်း ချွေးစေး တွေကိုရွှဲလို့။ ကျောင်းဆင်းဘဲလ်မြည်ပြီး အိမ်ပြန်ချိန်လမ်းတလျှောက်မှာ ငပဲက ဆက်ပြီးမာနေတုန်းပါ”
"ကျနော် ကျောင်းကနေ အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့်ငပဲခေါင်းမှာ ထိပ်အရေပြားကတင်းနေတာကို ခံစားရသလို ချည်သားအတွင်းခံဘောင်းဘီအောက် နွေးနေအောင်လုံခြုံနေတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးတစ်မည်ဖြစ်နေရပါတယ်။ တင်းကနဲ တင်းကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသလိုပဲဗျ။ အတွင်းခံဘောင်းဘီကိုလည်းဝတ်ထားသလို ပုဆိုးကိုလည်းကြပ်နေအောင်ဝတ်ထားတော့ ငပဲက သိသိသာသာ ထင်းနေတာကြောင့် နေရတာ သက်သောင့်သက်သာမရှိလှပါဘူး။ အိမ်ပြန်လမ်းက တွေ့မြင်နေရတာတွေအပေါ် အာရုံမကပ်မိပါဘူး …. ဘယ်လိုဖီလင်မျိုး ခံစားနေရတာလည်း ကျနော်မသိဘူးဗျ။”
"ကျနော် တစ်ခုခုတော့လုပ်ဖို့လိုပြီလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကာ အိမ်နောက်ဖက်ကို ဆတ်ကနဲချိုးကွေ့သွားလိုက်ပါတယ်။ အိမ်နံဘေးနားက စတိုခန်းရဲ့ နောက်မှာ မီးသွေးအိတ်တွေ၊ ဂျပ်စက္ကူပုံးတွေလှောင်ထားတဲ့အခန်းရှိတယ်လေ။ ကျောင်းလွယ်အိပ်ကို ဘုန်းကနဲပစ်ချ ပုဆိုး ခါးပုံစကို လျော့ပြီး အတွင်းခံဘောင်းဘီကို မချွတ်အားဘဲ ဒီအတိုင်းဘယ်ဘက်လက်နဲ့ငပဲကိုဖမ်းကိုင်လိုက်တယ်။ စက္ကန့် ၂၀လောက် တော့ ဘာမှဆက်မလုပ်ဘဲ ငြိမ်နေသေးတယ်ပေါ့”
"ကျနော် ကိုယ့်ကပ္ပာယ်အိပ်ကိုကိုယ် ထိကိုင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြီးက စိုစွတ်ပြီးနွေးနေသလိုပဲ…ကျနော့်လက်ချောင်းထိပ်တွေနဲ့ ထိုးမိ သလိုဖြစ်တော့ နည်းနည်းနာသလိုခံစားရပြီး ကလိထိုးသလိုခံစားမှုမျိုးလည်း တပြိုင်တည်းလိုလိုခံစားရပါရဲ့။ အသက်ရှူရခက်ခဲလိုက် တာ။ ကျနော် ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တယ်။ ကျနော် လိင်တံထိပ်အရေပြားကို နောက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ သားနဲ့ထိနေတဲ့ ငပဲကိုကိုင်ရတာ တစ်မျိုးပါပဲ။ တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တော့ အထက်အောက် အပြန်အလှန်လက်ကစားလိုက်တယ်။ ကျနော့်ပေါင်ခွဆုံတစ်ခုလုံး မီးထတောက်မတတ်နွေးလာသလို ခံစားရတာဗျ။ တတိယအကြိမ်လောက် လက်ကစားမိချိန်မှာတော့ တင်ပါးတွေကို ကြမ်းပြင်ကနေကြွအောင် ပင့်မြှောက်မိသလို လိင်တံတစ်ခုလုံးကိုလည်း လက်နဲ့ကောင်းကောင်းဆုပ်ကိုင် ကစားမိပါရော။”
"ကျနော်ကြမ်းပြင်ပေါ်ကို အထိန်းအကွပ်မဲ့လှဲလျောင်းမိလိုက်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း သတိမပြုမိတော့ဘူး လွတ်နေတဲ့ အခြားလက်နဲ့ မီးသွေးအိတ်တွေကို အားပြုကိုင်ထားမိတာပဲသိတယ်လေ။ ကျနော့်ရွှေဥတွေ တဆတ်ဆတ်ခါ နာကျင်နေသလို ငပဲကလည်း နည်းနည်းပွန်းပဲ့သွားသလားပဲ။ ဘာတွေဖြစ်သွားပြီလဲ မသိ? ကျနော် တစ်ခုခုဆိုးရွားတာများလုပ်မိသလားဆိုပြီး ကြောက်လန့်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ်တော့လည်း ဂရုမစိုက်မိပါဘူး ခံစားရတဲ့ ဖီလင်က တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ”
"ကျနော်လုပ်လက်စတွေကို ရပ်တန့်ရင်း အခန်းနံရံကိုမှီတွယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော် အတွင်းခံထဲလျှိုဝင်ထားတဲ့လက်ကိုထုတ် တိတ်တဆိတ် ထရပ်ရင်း ပုဆိုးကိုပြင်ဝတ်လိုက်ပါတယ်။ မာတောင့်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကြီးဘယ်လိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ ခဏစောင့် ကြည့်ရင်းပေါ့။ အိမ်ထဲက ကျနော့်အခန်းထဲရောက်ပြီးနောက် ရေချိုးထဲတန်းဝင်သွားကာ ငပဲကိုကောင်းကောင်း ဂရုတစိုက်ကြည့် လိုက်တယ်။ အရင်တုန်းကအတိုင်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ငပဲခေါင်းထိပ်အရေပြားအောက်မှာ နီရဲသွားသလိုပဲ နည်းနည်းတော့။ အဲ့ဒီအချိန်ထိ သုက်ရည်ပန်းထွက်မှုမျိုး မဖြစ်ခဲ့သေးဘူးထင်တယ်။ တစ်လလောက်ကြာမှ အရည်ကြည်လေးတွေ ထွက်တာမျိုးဖြစ်တာပါ”
"ကျနော်ပြောပြခဲ့တာက ဘ၀မှာပထမဆုံးအကြိမ် ပြီးဆုံးမှုကိုခံစားခြင်းကိစ္စပါပဲ။ အာ….လိင်အာသာဖြေ(-ွင်းထု) တာကို အိမ်မှာ တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာ လုပ်တာပေါ့။ မီးသွေးအိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲလုပ်ပြီး နှစ်ရက်လောက်ကြာချိန်မှာ ပြန်လုပ်မိတာကနေ ရပ်ကိုမရပ်တော့ဘူး ဟားဟား”
"ကျနော့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် လိင်အာသာဖြေ(-ွင်းထု)နေတာကိုမြင်ပြီး တတ်လာတာလို့ပြောရမယ်။ ၈လပိုင်း လောက်က ငပလီကမ်းခြေဘက် ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ မိုးလေကင်းတဲ့ကာလဖြစ်ကာ ၀င်းလှိုင်ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက ၁၄နှစ် ကျနော်က ၁၃နှစ်ပေါ့ အသက်အရွယ်က။ သူ့မှာ ၁၆နှစ်လောက်ရှိမယ့် အကိုတစ်ယောက်ရှိတယ်။ နာမည်က အောင်ကိုတဲ့။ ကျနော်က အချိန်တော်တော်များများ ကျနော့်အသက်အရွယ်ဝန်းကျင် ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ဆော့ကစားလေ့ ရှိပေမဲ့ အောင်ကိုက ၀င်းလှိုင်နဲ့ရောရောနှောနှောကစားလေ့မရှိဘူးဗျ။”
"ထူးထူးခြားခြားနေ့တစ်နေ့မှာတော့ အောင်ကိုက သူ့မိဘတွေကိုပြောတယ် အမေတို့နဲ့အချိန်ပြည့်နေတာနည်းနည်းပျင်းလာပြီ ၀င်းလှိုင် တို့နဲ့ဟိုသည်သွားဦးမယ်တဲ့။ ကျနော်တို့သုံးယောက် ကမ်းခြေမှာ တစ်ကြိမ်လောက်တော့ လှိုင်းအတူစီးခဲ့ဘူးတယ်။ အခုတော့ အောင်ကို က ပျင်းဖို့ကောင်းတယ် ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကျောက်ဆောင်တွေရှိတဲ့ဘက်ကို လျှောက်ကြည့်ရအောင်လို့ပြောလာရော။ အားလုံးဂရုစိုက် နောက် မကမြင်းနဲ့နော်သတိထားဆိုတဲ့ သတိပေးစကားသံတွေနားထောင်ရင်း မိဘတွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူခဲ့ရတာပေါ့နော်”
"ကျနော်တို့တည်းခိုရာ ဘန်ဂလိုတွေကနေထွက်ခွာရင်း ကျောက်ဆောင်တွေပေါ်ကို တစ်နာရီလောက် ဆင်းတက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ ၀င်းလှိုင်က အစပြုပြီး သေးပေါက်ကြတာထင်တယ် နောက်တော့ အားလုံးပေါက်ကြတာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့တွေဝတ်ထားတဲ့ ရေကူး ၀တ်စုံတွေကို အောက်ကိုဆွဲချပြီးပေါက်ကြတာလေ။ ကျောက်ဆောင်တွေကြားမှာဆိုတော့ ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ကျနော်တို့ကို မမြင်နိုင်ဘူးလေ။ ၀င်လှိုင်ရဲ့ငပဲက ကျနော့်ဟာနဲ့အတူတူပါပဲ ၄စင်တီမီတာ သို့မဟုတ် ၅စင်တီမီတာလောက်ပဲရှိမယ်။ လိင်တံထိပ်အရေပြားတွေကလည်း အရောင်ကအစအတူတူပဲဗျ။ ပြီးတော့ အမွှေးအမျှင်တွေလည်း မပေါက်ကြသေးဘူး။”
"အောင်ကို့ဟာ..အဲ သူ့ငပဲကတော့ မတူဘူးဗျ။ ငပဲက ၇စင်တီမီတာ ဒါမှမဟုတ် ၈ စင်တီမီတာလောက်ရှည်တယ်။ အတုတ်ကလည်း ကျနော်တို့ဟာရဲ့ နှစ်ဆလောက်ရှိတယ်။ သူ့လိင်တံထိပ်အရေပြားပေါ်က သွေးကြောမျှင်တွေကိုမြင်ရသလို ဆီးခုံမှာလည်း အမွှေး အတော်များများကိုတွေ့ရပါတယ်။ နက်မှောင်ပြီး ခြုံပုပ်လေးကျနေတာပဲ။ သူ့ငပဲကို ကျနော်စူးစမ်းမိတာမှာ အတော်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်ဗျ ကျနော့်ဟာထက်တော့တုတ်တယ်။ ကျနော် သူ့ပစ္စည်းကို စိတ်ဝင်တစားကြည့်နေတယ်ဆိုတာ အောင်ကိုရိပ်မိတယ်ဗျ”
"ငါတို့သေးပေါက်လို့တော့ပြီးပြီ ဒါတွေကို အပြင်ခဏထုတ်ထားရအောင်။ အောင်ကို နှစ်လိုလက်ရပြုံးရင်း သူ့ရေကူးဝတ်စုံကို အောက်ဖက် ပိုမိုဆွဲချရင်း ကျနော်တို့ကိုပြတယ်။ ငပဲက တန်းလန်း တန်းလန်းနဲ့အရှည်ကြီးပဲ။ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေက ခပ်စူစူနဲ့ဟနေသလို သူ့လိင်တံထိပ်အ၀လေးကနေ သေးစက်လေးက နေရောင်နဲ့အတူ တောက်ပနေသလိုပဲမြင်ရတာ။ သူ့ကပ္ပာယ်အိတ်ထဲက ဥတွေလည်း အသက်ရှူသွင်းထုတ်တာနဲ့အတူ တက်လိုက်ကျလိုက်ဖြစ်နေသလားပဲနော်။ ကျနော့်မှာတော့ သူ့လိုအသွင်အပြင်မျိုးတွေမရှိသေးပါဘူး။”
"အောင်ကိုက သူ့ငပဲကိုဆွဲကိုင်ပြီး ငါးစက္ကန့်လောက်တော့နေနေသေးတယ်။ ခဏနေတော့မှ အောက်လျှောကျနေတဲ့ ၀တ်စုံကိုအပေါ် ဆွဲတင်လိုက်တာမှာ မတ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲကြီးရဲ့ အ၀န်းအ၀ိုက်ကို ထင်းကနဲမြင်နေစေရော။ သန်မာတောင့်တင်းတဲ့ လက်မောင်းကြီး တွေ သန်မာတဲ့ ပခုံးတွေနဲ့အတူ ခပ်ထွားထွားသူ့ငပဲကို ကွက်တိပြနေသလိုပါပဲလေ။ အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကို စမြင်ချိန်ကတည်းက အခုထိ စိတ်ထဲစွဲနေတုန်းပါ။”
"အောင်ကိုက သူ့ငပဲကို ရေကူးဝတ်စုံထဲပြန်ထည့်ရင်း ‘ဘာမှမပြောနဲ့’လို့ဟန့်သေးတယ်။ ကျနော်နဲ့ ၀င်းလှိုင်လည်း ကိုယ့်ငပဲကို ၀တ်စုံတွေထဲပြန်ထည့် အပေါ်ကိုဆွဲတင်ဝတ်ကြတော့တာပေါ့။ ကျနော့်ငပဲဟာလည်း စိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူ ဘောင်းဘီထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတယ်။”
"ကမ်းခြေတွေကို အပန်းဖြေဖို့ရောက်တိုင်း ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ ရေကူးဝတ်စုံထဲကငပဲတွေဘယ်လို နေမလည်း တွေးတွေးမိတတ်ပါရဲ့။ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေချိန်ပြီးလို့ အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့လည်း အားလပ်ရက်ငပဲတွေအကြောင်း တွေးမိနေတုန်းပဲဗျ။ အောင်ကို သူ့ရေကူးဝတ်စုံထဲက ငပဲဆွဲထုတ်ပြီးကိုင်နေရင်း ရှည်ထွက်လာပုံကို ကျနော်ပြန်သတိရနေတယ်။ ဘယ်လိုမှန်းမသိပါဘူးဗျာ အဲဒါတွေကိုပြန်မြင်ယောင်မိတိုင်း စိတ်ထဲမရိုးမရွသောင်းကြမ်းလာကာ မကြာခင်မှာပဲ လူပျိုဖော်ဝင်လာတာ အချိန်သိပ်မကြာလိုက်ပါဘူး။ လူပျိုဖော်ဝင်တာနဲ့အတူ ကျနော့်စိတ်တွေဘယ်ကိုတိမ်းညွှတ်တယ်ဆိုတာ ဆန်းစစ်မိရင်း အခြားသဘောတူ ယောက်ျားလေးများနဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာဆော့ကစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်”
Alex Aung (17 June 2016)
Posted by Alex Aung at 4:58 PM No comments:
Sex ကိစ္စက ညစ်ပတ်ရှုပ်ပွမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ Towel ရှိနေရင်တော့ အတော်အသုံးကျတာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လေ။ တကယ်လို့ လိင်ဆက်ဆံပတ်သက်မိခဲ့ရင် ပြောပါတယ်။
သူနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ အချက်အလက်အစုံရှိတယ်ဆိုရင်လည်း သီးသန့်ရေးမှတ်ထားတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သူနဲ့ ပြန်လည်ပတ်သက်ချင်စိတ်ပြင်းပြနေမိတဲ့ အခါမျိုးမှာပေါ့။ ညက သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တယ် မပြန်ခင်မှာ သူ့မေးလ် inbox ထဲကို message တစ်ခုဖြည့်ထားသင့်ပါရဲ့။ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ မနေ့ညက ၊ အရင်အပတ်က၊ ပတ်သက်မိခဲ့စဉ်က ဘယ်လောက် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ခဲ့ရကြောင်း အားရခဲ့ကြောင်းတွေကိုရေးပြီး။
နှစ်ဦးသားပတ်သက်ပြီး သုံးရက်မြောက်တဲ့အထိ SMS ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Mail Message ပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိလုပ်ခဲ့တာကို ပြန်မဖြေခဲ့ မတုန့်ပြန်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တုန့်ပြန်ဖို့ အရိပ်အယောင်မပြခဲ့ရင် ဆက်ပို့တာမျိုး အီးမေးလ်ဆက်ပို့နေတာမျိုးမလုပ်ဘဲ သူဘာကြောင့် မတုန့် ပြန်တယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင် ချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒါကို မသိသားဆိုးရွားစွာ ဆက်လုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ဘက်က မလို လားဖွယ် မက်ဆေ့စ်တွေ၊ တုန့်ပြန်မှုတွေ ပြုလုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယဉ်ကျေးစွာ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ၊ ပြုမူဆက်ဆံပြော ဆိုပါ။ ဖုန်းမက်ဆေ့စ်ပို့တာ မေးလ်ပို့တာတွေဟာ နှစ်ဦးသားကြား ဆက်ဆံရေးမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တည်လာပြီဆိုမှ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ (အရည်မရအဖတ်မရ ကျူတဲ့ မက်ဆေ့စ်မျိုးလို စာတွေလို အကြောင်းအရာတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။)
Chat Room မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတယ်ဆိုပါတော့ သူ့ကို ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေ ပြန်နူးနေတာမျိုး၊ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို သိအောင်လုပ်နေ တာမျိုးတွေ လုပ်မနေသင့်ပါဘူး။ အဲဒါက အိပ်ယာတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေ။ ကိုယ်က သူနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ အရမ်းကောင်းမွန်တယ် ဆိုဦးတော့ Chat Room ပေါ်မှာ လေပွေမွှေ့မနေသင့်ပါဘူးလေ။ ခပ်မြန်မြန်လေးchat အပြင်မှာပြန်တွေ့ဖို့ ကြိုးစား ပြီးရင် နောက် တစ်ကြိမ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးကြဖို့ လုပ်ဆောင်သင့်ကြပါတယ်။
ကိုယ့် လိင်ကိစ္စပတ်သက်မှုတွေအကြောင်း သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ဝေမျှတယ်ဆိုတာ ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ပါတနာနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့တာတွေကို မကြာခဏပြောဆိုပြနေမယ်ဆိုရင် သတင်းအမြောက်အမြားပေးနေတာနဲ့တူပြီး သူ့အတွက် နှစ်လိုစိတ်တွေ တောင့်တစိတ်တွေ ပတ်သက်ချင်စိတ်တွေ စသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ cock size, တစ်ခုခု ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေမယ့် အချက်တွေလိုမျိုးတွေကို ပြောပြတယ်ဆိုရင်လည်း သင့်သူငယ်ချင်းကို တွေးဆချက်တွေ တစ်ချို့အာသီသတွေကို ပေးနေတာနဲ့ တူပါတယ်။
Ref: Q Magazine – May 2004 Issue
ကျနော်ငယ်ငယ် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက ကားကြုံလိုက်စီးတဲ့ကိစ္စဟာ အသားကျနေတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုကိုဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ခွင့်မှ မရှိခဲ့တာ။ ကျနော်က ဆင်းရဲသော မိသားစုနောက်ခံ အသိုင်းအ၀ိုင်း ကနေလာသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် လမ်းကြုံလိုက်စီးခြင်းဟာ အလုပ်ကိုသွားဖို့ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်သွားချင်ရာ ဘယ်နေရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သွားလာဖို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို လမ်းကြုံခေါ်တင်သူများအားလုံးကို အမြဲလိုလို ကျေးဇူးတင်မိပြီး သူတို့ကို ကျေးဇူးရှင်အဖြစ် မှတ်ယူဖို့ စိတ်ထားတစ်ခုကိုမွေးမြူနိုင်ခဲ့တာပေါ့လေ။
ကျနော်အသက်အရွယ်လည်းရလာ ကားတစ်စီးလည်းဝယ်စီးနိုင်တဲ့ အခြေအနေကိုရောက်လာတော့ လမ်းကြုံစီးတဲ့သူတွေကို ခေါ်တင်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကို အမြဲပြုကျင့်ပါတယ်။ ကျနော်ငယ်စဉ်က လမ်းကြုံစီးသူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကို သူတို့လိုက်ပါစီးနင်းခွင့်ပြု ခြင်းဖြင့် ရယူစေတာဖြစ်ပါတယ်။
တစ်နေ့သောအခါ ကျနော် မြို့ပြင်ခရီးတစ်ခုကနေ အိမ်ပြန်မောင်းလာတဲ့အခိုက် လူငယ်လေးတစ်ဦးလမ်းကြုံစီးဖို့ တားပါတယ်။ ကျနော် ကားကိုအသာရပ်ပြီး သူဘယ်ကိုသွားမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ သူအဖြေပေးတာကြားတော့ ကျနော်က “အကို မင်းကို ကားကြုံတင်လို့ရပါ တယ်…တက်လေ” လို့အလိုလိုပြောမိပါရဲ့။
ကျနော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စကားမဆိုဘဲ တစ်မိုင်လောက် ကားမောင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျနော့်ဒူးပေါ်ရောက်ရောက်လာတယ်။ ကျနော့်စိတ်ထဲ သရိုးသရီဖြစ်လာတာကြောင့် သူ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သူက “ကိုကြီး ကျနော် blowjob လုပ်ပေးချင်လို့ ကြိုက်လားဟင်?”
ကျနော် မူးမေ့သတိလစ်သွားသလိုခံစားရပါတယ် သူ့အပြောမှာ။ ကျနော် သူ့လက်ကိုကိုင်ကာ ဒူးကနေဖယ်ပစ်လိုက်တယ် ဘာစကားမှ တုန့်ပြန်မပြောဘဲနဲ့လေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးမိရတာက လူအသွားအလာများတဲ့ နောက်လမ်းဆုံတစ်ခုကျရင် ကားရပ်ပြီး အခုဆင်းတော့လို့ ပြောမယ်ပေါ့။ ထားပါတော့လေ ၉၀ခုနှစ်ကာလများစီက ဂေးတွေဟာ အခုခေတ်လို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမရှိဘူးပြောရပါမယ်။ ဂေးတစ်ယောက် ဖြစ်သည်ဆိုပါက လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကနေ ဖယ်ကြဉ်ခံရမယ် သဘောမကျဘူး။ ငရဲပဲ….သူတို့အနေနဲ့လိင်တူခြင်းကြိုက်နှစ်သက်သူများကို ဂေးလို့မခေါ်ကြသေးပါဘူး။ အခြောက်(queers)တွေလို့ပဲခေါ်ကြတုန်း သူတို့တွေက။
ဒါပေမဲ့ ကားကိုဆက်မောင်းလာဖြစ်သလို ပေါင်ကြားကညီဘွားကလည်း ၀တ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီထဲကဖောက်ထွက်မတတ် တဖြည်းဖြည်း မာတောင့်လာပါတယ်။ ဟိုမို (homosexual) တစ်ယောက်က အဆိုပြုတောင်းဆိုလာမှုကြောင့် စိတ်တွေထန်လာတာ ကျနော် ကျနော် အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်က straight တစ်ယောက်လေ။ သို့သော်လည်း သူ့ပြောဆိုချက်ကို လျစ်လျူမရှုနိုင်ဘဲ ကျနော့်ငပဲဟာ ပိုပိုမာလာခဲ့ပါတယ်။ သူလည်းသတိမပြုမိအောင် သက်သောင့်သက်သာဖြစ်အောင်လုပ်သည့်အနေနဲ့ ဖင်ကိုအသာကြွဟိုသည်ရွှေ့ထိုင်ဖို့ ကျနော်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။
ကျနော်သူ့ကိုမသိမသာငဲ့ကြည့်လိုက်တော့ သူကပြုံးကြည့်နေရဲ့။ လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်အဖြစ်အပျက်တွေ အဲ ဘောင်းဘီခွဆုံ ဖောင်းကားလာခြင်းအား ဖုန်းကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကို သူသိနေကြောင်း ရိပ်မိရပါတယ်။ နောက်တော့ မ၀ံမရဲလေသံမဟုတ်သော အသံဖြင့် ထပ်မံတောင်းဆိုပါတယ် “ကိုကြီး ညီပြောတာကိုလိုချင်နေပါတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်?”
ဒီကောင်လေးရဲ့ ပမာမခန့်ပြောစကားအပေါ် ဘယ်လိုမှတုန့်ပြန်စကားမဆိုနိုင်လုနီးပါးဖြစ်ရပါတယ်။
နောက်တော့ သူ့လက်တွေဟာ ကျနော့်ဒူးပေါ်မဟုတ်တော့ဘဲ စုပ်မျိုဖို့စောင့်နေတဲ့ငပဲပေါ်ရောက်သွားကြောင်း ခံစားသိရှိမိရပါရဲ့။
အောက်ကိုငုံ့မကြည့်ရဲစွာ ရှေ့တူရှုသို့ ကျနော်ကားဆက်မောင်းနေခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကို သူစတင်ပွတ်သပ်ဖိညှစ်တာတွေ ခပ်ဖြေးဖြေးလုပ်တာကြောင့် အမှန်တကယ် လက်သမားလုပ်သလို ခံစားရပါတယ်။ ကျနော့်အတွေးကတော့ ‘ဒီလိုလုပ်တာ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးလေ’ ဆိုတာကနေ ‘ငါအခြောက်မှမဟုတ်တာ၊ ဘာကြောင့် သူလုပ်တာကိုခွင့်ပြုမိသလဲ? လတ်တလောလုပ်ကိုင်နေတာတွေကိုရပ်တန့် သူ့ကိုကားထဲကနေ ကန်ထုတ်ရမှာ ဘာကြောင့်မလုပ်မိသလဲ?’ အတွေးများဆက်နေပါတယ်။
နောက်တော့ သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုးလေသံနဲ့ “နောက်လမ်းဆုံတစ်ခုကျော်ပြီးရင် လူမနေတဲ့အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ ကိုကြီး စိတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့အိမ်ကြီးနောက်ဘက်ကို မောင်းဝင်သွားပြီး ကားရပ်ထားလို့ရတယ်” လို့ပြောတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။
တုန့်ဆိုင်းတာတွေဘာတွေမလုပ်ဘဲ အဆောက်အအုံကြီးနောက်ဘက်ကိုကွေ့ချ မောင်းနှင်သွားလိုက်ပြီး ကားကို ကျနော်ရပ်တန့် လိုက်ပါတယ်။
ကျနော့်ငပဲကို သူကိုင်တွယ်ဖျစ်ညှစ်နေတဲ့အချိန်တလျောက်မယ် ခံစားချက်တွေက တကယ်ကောင်းနေတာကြောင့် လုပ်နေတာတွေ ရပ်တန့် လိုက်ဖို့ မပြောချင်ပြန်ပါဘူး။
ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီကဇစ်ကို သူခပ်ဖြည်းဖြည်းဆွဲချတယ်၊ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်လိုက်ကာ မာတောင့်နေတဲ့ငပဲကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ခပ်တန်းတန်းမတ်နေတာ မြင်ကွင်းထဲရောက်လာပြန်တော့ သူ့လက်အစုံနဲ့စွဲကိုင်ကာ အကြိမ်အနည်းငယ်လောက် ငရုပ်ဆုံထောင်းသလိုလှုပ်ရှားပေးရော။ အောက်ကို ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့ဦးခေါင်းဟာ ကျနော့်ငပဲနဲ့ ထိလုနီးပါးကပ်နေတာကို မြင်ရပါတယ်။
နောက်တော့ နွေးထွေးစွတ်စိုမှုနဲ့အတူ သူ့အာခံတွင်းထဲ ကျနော့်ပစ္စည်းလေး တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိသွားပါတယ်။ မျက်ဝန်းတွေကိုမှေးမှိတ် ထားကာ သူလုပ်ဆောင်ပေးနေသမျှကိုမကြည့်ရဲဘဲ မလှုပ်မယှက်ထိုင်နေမိတယ်။ သူကတော့ ထိပ်ဖျားလေးကိုပါးစပ်ထဲအထုတ်အသွင်း လုပ်နေရာကနေ အထဲထဲထိပိုပိုရောက်အောင်ကြိုးစားတာများ သူ့နှုတ်ခမ်းသားနဲ့ နှုတ်ခေါင်းတွေ ကျနော့်ဆီးခုံက အမွှေးနုလေးတွေနဲ့ ထိကပ်တဲ့အထိပါပဲ။ ခံစားရတဲ့ ဖီလင်ကိုဘယ်လိုပြောပြရမလဲမသိဘူးဗျာ အရင်ကတစ်ခါမှဒီလိုမခံစားဖူးဘူးလေ။ ရုတ်တရက်ဆိုသလို ဘယ်လိုမှမထိန်းနိုင်စွာဖြင့် သူ့လည်မျိုထဲကို တိုက်ရိုက်သုက်ရည်ခပ်များများကို ပန်းထုတ်လိုက်မိတာမှာ သူ သီးခြင်း သို့မဟုတ် ချောင်းဆိုးခြင်း မဖြစ်ဘဲ အကုန်မျိုချပစ်တယ်ဗျာ။
ခပ်မြန်မြန်ပဲဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အခြေအနေကို မယုံကြည်ရဲတဲ့လူတစ်ယောက်ပုံစံမျိုး ကျနော့်အသွင်အပြင်ကိုမှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူ့နှုတ်ခမ်း သားတွေ ပါးစပ်တွေကို ကျနော့်ငပဲကနေ တကယ့်ကိုခပ်နှေးနှေးအရှိန်မျိုးနဲ့ဖယ်ရှားပါတယ်။ အိုး…အခုမှ လုပ်မိနေသမျှကိုရပ်တန့်ပစ်လိုက် ချင်စိတ်ဝင်လာတယ်။ ကျနော် ကျနော် အခြောက်တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်လား? အခြောက်….ကျနော်အခြောက်ဖြစ်ဖို့ လမ်းမှမရှိတာ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေ။
ကျနော့်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးတဲ့ သူ့အပြုံးနဲ့အကြည့်ဟာ အတော်ထူးဆန်းပါတယ်။ “ ကိုကြီးကြိုက်တယ်မဟုတ်လား? ကြိုက်တယ်ဟုတ်” ကျနော်သူ့အမေးကို ပြန်မဖြေဘဲ ချီတုံချတုံဖြစ်နေပြန်တော့ သူက “ ညီသိပါတယ်ဗျာ…ကိုကြီးကြိုက်ပါတယ်။ ပြီးတာလည်း အရမ်း မြန်တယ်….ဟဲဟဲ…ပြီးတော့ ပန်းထည့်လိုက်တာလည်း အများကြီးပဲ ညီတော့သဘောကျတယ်ဗျာ”
သူ ကျနော့်ပေါင်ကြားခေါင်းအပ်ရာကနေ ထရပ်လိုက်တော့ သူ့ပေါင်ကြားမှငထွားက အပေါ်ကိုမတ်မတ်ထောင်နေတာ အံ့အားတသင့်မြင်ရ ပါတယ်။ သူ့ငပဲကိုအပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်း ကျနော်မမှန်းနိုင်လောက်စွာ ညှို့ဓာတ်မိသွားပါရော။ ကျနော့်ငပဲက ခြောက်လက်မရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ငပဲဟာ အနည်းဆုံးနှစ်လက်မလောက်ပိုရှည်မယ်။ သူ့ကိုကြည့်ရင်း ဒီလိုလူငယ်လေးတစ်ယောက်မှာ ကြီးမားထွားကြိုင်း တဲ့ငပဲ တစ်ချောင်းရှိနေလိမ့်မယ်လို့ မယူဆခဲ့ဘူးလေ။ အနည်းဆုံး ၈လက်မဗျာ။
ကျနော်သူ့ငပဲကိုစိုက်ကြည့်နေတာ မြင်သွားပြီးနောက် ပြုံးလိုက်ကာ “ ကိုကြီးကြိုက်လား?” ကျနော့်စိတ်ထဲထင်မြင်ယူဆခံစားနေတာတွေကို ပွင့်လင်းစွာထုတ်ပြောဖို့ခက်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ “အကိုတော့ မင်းမှာ ငပဲအထွားစားကြီးရှိနေတာ ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူး” လို့မထိန်းနိုင်စွာပြော ထွက်မိပါရဲ့။ ကျနော့်ပြောစကားကြောင့် သူ့တုန့်ပြန်အမေးတစ်ချက်ထွက်လာတာကြောင့် ရှော့ခ်ကိုဖြစ်ကရော။ “-ုပ်မပေးချင်ဘူးလား ကိုကြီး”
လေသံခပ်ပျော့ပျော့နဲ့ ကျနော် ပြန်ဖြေလိုက်တယ် “ မင်းနားမလည်ပါဘူးကွာ။ ငါက အခြောက်မှမဟုတ်တာ”
သူက “ ကိုကြီးက အခြောက်လားဘာလား ညီမမေးဘူးလေ။ ကျနော့်ငပဲကို -ုပ်ပေးချင်စိတ်ရှိလားလို့မေးတာ”
ကျနော့်ပါးစပ်ကနေ အဖြေတစ်ခုခပ်မြန်မြန်ထွက်လာပြန်တော့ ကိုယ့်ဟာကို အံ့သြရပါတယ်။ “အင်း….စမ်းကြည့်ချင်တယ်”
သူ မတ်တပ်ထရပ် ကျနော့်ကိုယ်ကိုခွရပ်ရင်း ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ကျနော့်ဦးခေါင်းကိုသူ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ထိန်းကိုင်လိုက်ကာ သူ့ပေါင်ခြံဆီ မျက်နှာအပ်ဖို့ ဖိအားပေးပါတယ်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ရင်မဆိုင်နိုင်မကြည့်ရဲစွာ ကျနော်မျက်ဝန်းများကိုမှေးမှိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ ခဏအကြာမှာတော့ သူ့ငပဲခေါင်းဟာ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းသားများစီဖိကပ်လာပါတယ်။ သူ့ငပဲကိုပိုပိုဖိတိုးလာတာကြောင့် ကျနော့်နှုတ်ခမ်း များကို အသာဟပေးလိုက်တော့ လျှောကနဲဝင်သွားပြန်ရော။
သူ့ငပဲကြီးကို အဆုံးထိဝင်အောင် မဟားတရားဖိသွင်းလိုက်တာကြောင့် ကျနော် အေ့ာအံမိမတတ် သီးသလိုဖြစ်သွားတာကြောင့် အနည်းငယ် နောက်ပြန်ဆွဲထုတ်ရင်း မကြာခင်မှာပဲ အထုတ်အသွင်းနှေးနှေးနဲ့ -ိုးပါတော့တယ်။ ကျနော်ဦးခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထိမ်းကိုင် သူ့တင်ပါး ဆုံတွေ ကိုလှုပ်ရှားပေးကာ ခပ်ဖြေးဖြေး-ိုးနေရာက အမြန်နှုန်းအရှိန်မြှင့်လိုက်ကာ အတွင်းထဲထိရောက်အောင် ပိုပိုကြိုးစားပါတယ်။ ကျနော် အရင်မရဘူး မခံစားဖူးတဲ့ ငပဲထိပ်ကအရည်ကြည်အချို့စိမ့်ထွက်လာမှုအရသာကို လျှာဖျားမှခံစားရပါပြီ။ ဘယ်လိုအရသာလို့ပြောလို့မရပေမဲ့ တစ်မျိုးတစ်မည် ချိုသလိုလိုပါပဲ။ သူ ကျနော့်မျက်နှာကိုဆက်-ိုးနေတဲ့အခိုက် ကျနော့်ဦးခေါင်းကိုအလိုက်သင့်လှုပ်ရှားပေးမိလာတာများ အခု ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လုပ်ရှားနေတဲ့လုပ်ရပ်အပေါ် အမှန်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်လာပြီ ထင်ရပါတယ်။
သူက “ပထမဆုံးအကြိမ် blowjob လုပ်တာဆိုပေမဲ့ မဆိုးဘူးဗျ….ဆက်လုပ်ပေးနော်” တဲ့။
နောက်တော့ သူ့နှုတ်ဖျားဆီက မိန်းမောသာယာသံ ညည်းညူသံတွေကို စတင်ကြားလာရပါတယ်။"Oooooooohhhhhhhh shit" ဒါ ဒါ သုက် ရည်တွေပန်းထုတ်တော့မယ့်အချိန်ရောက်ပြီထင်တယ်။ ကျနော် သူ့ငပဲကိုပါးစပ်ထဲကနေဆွဲထုတ်ဖို့ စတင်ကြိုးစားပြန်တော့လည်း ကျနော့် ဦးခေါင်းကိုဖိကိုင်ထားတဲ့အနေအထားအတိုင်းထိန်းထားပြီး သူ့တင်ပါးဆုံများကို ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားစေရင်း -ိုးပါရော။ ခပ်ပြင်းပြင်း တစ်ချက်အသက်ရှိုက်ကာရှူရင်း သူ့ငပဲကို ကျနော့်လည်မျိုထဲထိတိုင်ဖိကပ်ပြီး သုက်ရည်တွေကိုလောင်းထည့်ပါတယ်။ စို့ထွက်တတ်တဲ့ အရေကြည်ထက် ပိုပြီးငန်သလို ပိုပြီးခါးတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ချောင်းဆိုးတာလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်မရှိ ဆွဲထုတ်ဖို့လည်းမရတော့ သုက်ရည်အနည်းငယ်ကိုထွေးထုတ်မိရုံမှအပ ကျန်တာတွေအကုန် မျိုချပစ်မိပါတယ် ခင်ဗျ။
သူ့ရွှေဥတွေဟာ ကျစ်ကနဲကျစ်ကနဲလှုပ်ရှားသွားပြီးနောက် ကျနော့်ဦးခေါင်းကိုင်ထားတာကို လွှတ်ပေးလိုက်ကာ ပျော့ပြောင်းစပြုလာတဲ့ သူ့ငပဲကို ကျနော့်ပါးစပ်ကနေ ဆွဲထုတ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲ ကျနော့်စိတ်တွေ ညစ်ညူးလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကြုံဆုံပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အပြုအမူတွေကို ကျနော်ကြိုက်နှစ်သက်သလား မကြိုက်နှစ်သက်ဘဲ စမ်းသပ်ကြည့်ရုံလား ဆုံးဖြတ်ဖို့ စောပါသေးတယ်။ သူ ကျနော်ဘယ်လိုခံစားချက်တွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာ သူ အာရုံ ခံမိတယ်ထင်တယ် “မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဗျာ။ ဒီလိုလုပ်မိရုံနဲ့ အခြောက်ဖြစ်ပြီလို့မဆိုသာပါဘူး”
အ၀တ်အစားတွေသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ကြပြီးနောက် အရင်ကသူ့ကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုတဲ့နေရာထက် သွားရေးလာရေးလွယ်ကူ မယ့်နေရာကို ကားမောင်းသွားလိုက်ကာ ချပေးထားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ကားထဲကသူထွက်သွားတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ကျနော့်အိမ်ကိုပဲ တန်းမောင်း လာရင်း အခြောက်ဖြစ်နေပြီလား ဒါမှမဟုတ် တစ်မူထူးတာသက်သက်ပဲလား အတွေးဝင်မိပါတယ်။
အဖြစ်အပျက်တွေ ဆယ်နှစ်လောက်ကြာသည်အထိ လိင်တူခြင်း အမှတ်မထင်ပတ်သက်မှုဖြစ်စဉ်တွေ ကျနော်မတွေ့ကြုံရတော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တွေကုန်ဆုံးလာချိန်မှာတော့ အိမ်ထောင်ပြုချင်စိတ်ကုန်ဆုံးနေတာကို သတိထားမိပါတယ်။ အတိတ်ကိုပြန်ငဲ့ကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း ကျနော့်ငပဲကို သူတပါးကပါးစပ်နဲ့ပြုစုပေးတာကို သဘောကျကျေနပ်သလို သူတစ်ပါးငပဲကိုပြန်ပြုစုရတာကို ပျော်သလိုပါ။ လိင်တူခြင်း အရမ်းတပ်မက်တာ သို့မဟုတ် မဟုတ်ခြင်လည်းမဟုတ်ဘူး လိင်အာသာပြေဖို့အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် ကျနော်ကြိုးစားချင်မိတဲ့အရာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။
အလုပ်အကိုင်ကိုပဲအာရုံစိုက်ရင်း အားလပ်ချိန်ကို အားကစားလုပ်ကာ ကုန်ဆုံးနေတဲ့အချိန်များနေပြီထင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပါတ်တော့ မြို့စွန်က Adult Bookstore ကိုသွားမယ်၊ အခွေသစ်တွေမွှေမယ်၊ အခန်းငယ်လေးထဲသွားကာ မြည်းစမ်းကြည့်မယ်လေ။
အားလုံးပြီးရင်တော့ ဘာတွေ ကများ နာကျင်တဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပေးဦးမှာပါလိမ့်?
Alex Aung (1 June 2016)
Posted by Alex Aung at 5:37 PM No comments: